Snapseed dia nohavaozina ho an'ny iOS manampy fitaovana vaovao: curves | Vaovao IPhone
Ao amin'ny App Store dia afaka mahita rindranasa marobe izay mamela anay hanova ny sarinay hanitsy ny valiny amin'ny zavatra tianay izahay, saingy noho ny fihazakazahana na ny fitifirana dia tsy afaka nahazo izany izahay. Iray amin'ireo ampiasaina ny Snapseed, fampiharana izay karakarain'i Google ary havaozina tsy tapaka. Ireo tovolahy avy any Mountain View dia namoaka fanavaozana vaovao ho an'ity app ity miaraka amin'ny fiasa vaovao antsoina hoe curves ho fanampin'ny fanatsarana isan-karazany hanandrana handresy lahatra ireo mpampiasa izay aleony mampiasa fampiharana fanovana sary hafa.
Ny zava-baovao lehibe entin'ny Snapseed fanavaozana isa 2.15 antsika dia mifandray amin'ny lahasa vaovao antsoina hoe curves. Raha manova sary amin'ny alàlan'ny rindranasa birao hafa ianao na avy amin'ny iPhone na iPad dia azo antoka fa fantatrao izany fiasa izany mamela antsika hanitsy ny famirapiratana, ny lokony ary ny lokon'ny sary. Fa ankoatr'izay dia manome preset isan-karazany izay manadihady ny sary izahay hanolotra anay ny valiny mifanaraka indrindra amin'ny valiny tadiavinay.
Snapseed dia nanatsara ny algorithm hahafantarana ny tarehy, amin'ity fomba ity dia mora kokoa ho an'ny fampiharana ary koa tsotra, ny tarehy ihany no mamantatra ny ao ambadika. Raha tianay ny manavaka manokana ny fakana an-tsika an-tsoratra dia nanampy ity safidy ity ampio fiatoana tsipika amin'ny fomba soratra maro-tsipika, safidy izay andrasan'ny mpampiasa tokoa saingy tsy nanapa-kevitra ny hampihatra i Google.
Mba hamitana ny zava-baovao farany dia hitantsika izy rehefa mamadika sary ho mainty sy fotsy, indrindra raha nidina tamin'ny hazavana ambany ilay fitifirana, ny voan'io dia miavaka indrindra, fa amin'ity fanavaozana ity, manjavozavo ny voa, manala ny sary lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Snapseed dia nohavaozina ho an'ny iOS manampy fitaovana vaovao: curves
Tsy ho voahitsakitsaka ve izy io?
azo antoka. Misaotra amin'ny fanamarihana.
Ny Apple Watch dia namaky ny firaketana ny varotra rehetra nandritra ny telovolana farany